रगतको चर्को अभाव
रिपोर्ट नेपाल | 2020 Nov 21 | 08:42 am	44
काठमाडौं, मंसिर ६: नयाँबजारका सुमन तामाङ केही दिनअघि घरको भर्‍याङबाट लडे। शरीरमा गम्भीर चोट लाग्यो। उनलाई पिपुल्स अस्पताल नयाँबजारमा राखिएको छ। डाक्टरले आइतबार अपरेसन गर्ने भनेका छन्। त्यसका लागि परिवारले रगत जुटाउन सकिरहेको छैन।
ब्लड बैंक, रेडक्रस सबैतिर गइसकें, उनका काका आकाश लामाले भने, रगत कतै पनि पाइएको छैन। ब्लड बैंकमा पनि छैन भनेर फर्काए। आफ्नै डोनर (दाता) ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। आफैं कहाँबाट ल्याउने ? कोभिडका कारण कोही पनि आउन मान्दैनन्। उनी रगतका लागि विभिन्न संस्थासँग गुहार मागिरहेका छन्।
काठमाडौंका राम थापा (नाम परिवर्तन) बिरामी भएर ओम अस्पतालमा भर्ना भएको दुई दिन भयो। उनलाई तत्काल प्याकसेल दिनुपर्ने भन्दै अस्पतालले ल्याउन भनेको छ। तर, ब्लड बैंकमा रगत पाइँदैन। परिवारका अन्य सदस्य पनि कोभिड भएका कारण घरमै आइसोलेसनमा छन्।
थापाका सहयोगी हरि खतिवडाले रगत खोज्दा कतै नपाइएको बताए। ‘काठमाडौं, ललितपुर सबैतिरको रेडक्रसमा पुगें तर रगत पाइएन’, उनले भने । उनले भने, ‘ब्लड बैंकमा गएँ, त्यहाँ पनि छैन। डोनर लिएर आउनु भन्नुहुन्छ। भन्नेबित्तिकै डोनर कहाँबाट ल्याउने ?’
उनले ब्लड बैंकका कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएको गुनासो गरे। ‘खासमा ब्लड बैंक एकदमै गैरजिम्मेवार भएको देखेँ’, उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सिधै छैन भन्नुहुन्छ। डोनेसन हुँदै छ आउँछ होला भन्ने आश्वासनसमेत पाइँदैन। कमसेकम गम्भीर अवस्थाका लागि त रगत खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ नि ! त्यो पनि छैन।’ यद्यपि, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले आवश्यक रगत जुटाइदिएको उनले बताए।
रगतका लागि भौंतारिने धेरै छन्। रगत अभावका कारण धेरै बिरामी छटपटाइरहेका छन्। नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्मचार्यले जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको लाचारीले रगत अभाव भएको बताए। ‘रगत अभाव हुनुमा मुख्य कारक जिम्मेवार पदाधीकारीको लाचारी हो’, कर्माचार्यले भने, ‘सम्बन्धित निकायले कम्तीमा रगत दिन डोनरहरूलाई उत्साहित गर्नु पर्दैन ? यस्तो संवेदनशील विषयमा केही पनि गरेको देखिँदैन।
रक्तदातालाई आकर्षित गर्न नसक्नु ब्लड बैंक र अन्य जिम्मेवार निकायको कमजोरी भएको उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार लकडाउनको अवस्थामा माग कम भए पनि त्यसबेला रोकिएका अपरेसन धमाधम भइरहेकाले रगतको माग बढेको छ। यस्तो अवस्थामा भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई रक्तदान गराउनमा जिम्मेवार निकाय नलागे धेरैको ज्यान जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट